Files MTS waa files video inta badan soo saara kaamirada ugu. Waxa ugu fiican oo ku saabsan files video qaab MTS waa in size weyn ee aad qeexitaanka sare video lagu tilmaantay Tifaftirayaasha BBC karaa, kuwaas oo files yar oo dhexdhexaad ah, si ay u haboon kaadh yar oo kaamirada yar. Laakiin ka biyodiiday waxaa ka mid ah waa in madal warbaahinta ugu online ma taageeri file this. Sidaas waxa aad doonaysid in aad samaysid haddii aad rabto inuu u ciyaaro aad video la telefoonka gacanta? Waa wax iska fudud. Beddelaan faylka! Inta badan telefoonada gacanta ciyaari karo files 3GP, si diinta aad file video MTS in 3GP waa xalka ugu wanaagsan.
Qeybta 1: MTS Best in Converter 3GP
Qeybta 2: Free MTS in Converter 3GP
Qeybta 3: MTS Online in Converter 3GP
Mid ka mid ah video Converter ugu kalsoonaan karo aad isticmaali kartaa waa Wondershare Video Converter Ultimate , haddii aadan isticmaali barnaamijkan ka hor, hoos ku qoran waa hage ku tallaabo-tallaabo ku saabsan sida loo isticmaalo.
Waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo software Wondershare Video Converter Ultimate ka dibna u soo dajiyo on qalab aad.
Download barnaamijka goobta, software tani waa labada diyaar u ah PC iyo Mac isticmaala.
Talaabada 2: Launch Software iyo Import File
Marka aad samaysay oo aad download iyo rakibidda, isla markiiba lagu daahfuri software ah. Dejinta file MTS aad rabto in aad rakibto; waxaa jira laba siyaabood oo sidaas loo samayn. Marka hore, Riix badhanka + File dar, folder faylka arbushin doona, ay helaan faylka MTS, dooro, oo guji badhanka Open. Habka labaad waa si fudud faylka jiidayeen ka folder il iyo u tagtey ee guddiga software ah.
Talaabada 3: Dooro Qaabka Output ah
Next waa in ay doortaan sida 3GP format wax soo saarka aad, inay sidan sameeyaan, guji hoos u soo dhaadhacay arrow dhinaca midigta ee suuqa kala barnaamijka, xulashada muuqan doonaa, heli 3GP ah oo ay doortaan. Marka aad u riix, menu doorashada qaab wax soo saarka baabi'i doontaa.
Talaabada 4: Beddelaan Video ah
Hadda inaad doorateen qaab wax soo saarka, waxaad diyaar u tahay badalo faylkaaga. Si fudud riix badhanka badalo waxaad ka heli kartaa rukun-xaq u hooseysa ee suuqa kala barnaamijka sida sawirka ayaa muujinaya. Sug qaab beddelidda in ay ku dhameysan oo lagu sameeyey! Your video haatan diyaar u yahay in loo arko la telefoonka gacanta.
Haddii aad rabto in aad isticmaasho xal dhibaatooyinka video waafaqsan aad, waxa ay isku dayi hadda! Wondershare Video Converter Ultimate Waa one-stop video xal aad u baahantahay oo diinta oo dhan.
Wondershare Free Video Converter kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo, download, edit, oo ayan u hurin si aad videos, meesha ugu sareysa ee taabato kala iibsiga wanaagsan loo soo abaabulay dhexeeya internetka, warbaahinta indhaha, iyo disk adag. Waxay leedahay wax kasta oo aad u baahan tahay in interface fudud, dabacsan, oo user-friendly.
Sababtoo ah Wondershare Free Video Converter aad hadda soo bixi kartaa nooc kasta oo videos internet ka ama qaadan video ah oo wax la isticmaalayo nooc kasta oo qalabka oo aan ka walwalayn ku saabsan oo aan si aad u daawato ama u geliyaan on website kasta video qaybsiga adduunka oo dhan ay awoodaan Wide Web. Iyo sababta oo aad kala soo bixi kartaa oo aad u isticmaasho lacag la'aan ah, uma baahnid inaad lacag galiso kaliya in la sooro naftaada daawashada dhan videos ama filimada aad rabto.
Haddii aad u baahan tahay xal online , waxaad isku dayi kartaa this Converter online halkii.
> Resource > Beddelaan > Sida loo rogo ama MTS Files in 3GP